China Custom acryli led neon flex strip 12V logo sign ọkụ-20LPS003 Nlụpụta na Factory | Meiyi
Omenala acrylic mere neon flex strip 12V logo sign ọkụ-20LPS003
Nọmba nlereanya: NKP ihe: Ikanam pop ịrịba ama
Na-egbu maramara mode: Static, na-egbu maramara Ihe: Acryli, ABS
size: customizable Agba bọlbụ: acha uhie uhie, ọcha, acha anụnụ anụnụ
Oge ndụ: Afọ atọ Ọrụ Ngosipụta: Na-aga aga
Oge: ahịa, Ogwe, ụlọ ahịa ọ bụla Ngwaahia: Nabata
Port: Shanghai voltaji: 12V
1. Neon ịrịba ama n'abalị ìhè bụ ezigbo anya ini enye okụtde mgbakwunye gị ọzọ ma ọ bụ n'ụlọ tebụl ma ọ bụ mgbidi, na-enwu gbaa, a magburu onwe neon art ìhè dochie na-agwụ ike oche oriọna ma tinye agba na ọchịchịrị.
2. Ọkụ anyị bụ nchekwa zuru oke dịka ọkụ ọkụ bụ isi iyi ọkụ ma na-ewepụ ọkụ ọ bụla na-akpata esemokwu anya ma ọ bụ isi ọwụwa.
3. Ọ dị mfe iji ya - Ìhè ahụ ga-anọgide na ntukwasi obi na onye na - ejide ya ma ọ bụrụ na ọ bịa na otu ma ọ bụ nwee ike jikọta ya na mgbidi iji nye nro dị nro ma dị nro nke dị mma ma dịkwa oke mkpa.
4. Onyinye ANAKWETA Na Ekeresimesi, Afọ Ọhụrụ, Birthbọchị ọmụmụ, oriri na ọ ,ụ ,ụ, Ọrụ, Oge pụrụ iche, wdg.
Companylọ ọrụ anyị gafere ma mejuputa iwu nke usoro njikwa njikwa ISO9001, bulite ngwaahịa niile site na CE, RoHS, FCC na asambodo nchekwa mba ndị ọzọ, ụfọdụ ngwaahịa agafeela asambodo UL, TUV na PSE.
Beer Neon Light Signs New LED Tube Technology - Neon Light mere site na agba Silicone ikanam tube, Tụnyere ọdịnala iko neon ọkụ, ọ bụ ihe na-enwu gbaa na odi mfe, environmentally friendly, inogide, ike ịzọpụta, enweghị mkpọtụ na enweghị okpomọkụ, 12V, mfe jiri ọtụtụ ndapụta.
Beer Neon ịrịba ama ejiri aka mee, akwa mma acrylic backplane.
Neon Light Beer Sign, Ihe na-enye ìhè Neon Sign Lights na-egosi n'ofe mgbidi gị, windo ma ọ bụ ọnụ ụzọ. Ọ bụ ụzọ dị mma iji mee ka ụlọ ọ bụla bụrụ ebe dị jụụ, na-enwu gbaa n'ime ụlọ gị
Nnukwu Onyinye maka Enyi ： Nkecha Ji achọ Neon Ìhè maka ime, windo, ọ ga-abụ a karịsịa jụụ foto ndabere maka a ọzọ, ihe omume. Họrọ onyinye maka ndị enyi gị
Ihe ngosi Beer Neon, Akwụkwọ ikike otu afọ: anyị na-enye akwụkwọ ikike otu afọ iji mee ka afọ ojuju gị.
Nke gara aga: Omenala okike ekepụtara Flex neon ọkụ neon akara ngosi-20LPS002
Osote: Anya-ejide LED neon akara aka, neon ìhè-20LPS014
Anya-ejide LED neon akara aka, neon ìhè-20LPS014
Emeputa ahaziri ikanam ìhè iko ne ...
Omenala okike mere ka ifufe neon sig neon ...
Neon nwere akụkụ atọ-20LPS015
Neon akara aka na acrylic-20LPS016
N'èzí Omenala 12V Ikanam Flex Acryli Neon Banye-2 ​​...